Zvisikana Zvidiki Zvotengesa Bonde MuChiredzi - HealthTimes
Zvisikana Zvidiki Zvotengesa Bonde MuChiredzi
October 7, 2020 October 7, 2020 Michael Gwarisa
Vasikana paChigarapasi (Pic The Herald)
INGUVA dzepfumbamwe Manheru, vazhinji muguta re Chiredzi vakugadizirira kunorara kuti vafumo bata jongwe muromo vakananga kumabasa zuva rinoteverea. Vutunga huri mubishi kuita ma press up hwakamirira kuti vanhu varare huwane kusvusvura.
Na Michael Gwarisa ari Muchiredzi
Nechekure, kurikunzwika Redhiyo ichidandauka zvekuti huyai muone. Miridzo nemheterwa zvirikuridzwa kuratidza kuti vanhu vari kutamba chipisi. Haungatombofungiri kuti kune Lockdown. Mukuru umwe atakataura naye akati iye mhere mhere iyi yainge ichibva kubhawa re Chigarapasi, rinova zvakare bhawa gururusa kupinda mamwe ose munyika yeZimbabwe.
Tati fambe Chinhamwe takananga kwaibva neruzha, takaona mumugagwa unoenda ku Chigarapasi wakati nda nda nda nevasasikana vevanhu vakapfeka zvino zvigwishu nezvi mba mba mba. Yaive bata wabata, mumwe nemumwe achiedza kuda kutengesa bonde kunanizvake akudarika nenzira. Vamwe ndovaishevedzera kuti mutengo wadzikiswa, vamwewo ndivo vaiti vachangoburwa huye vari fresh, ukatenga unodya nerifa.
Nechemukati membona mbona iyi, takaona zvisikina zvidika, zvino zvimhupupu zvichangonti samhukei zvisati zvaumba chupfuva huye zvinoratidza kuti zvichiri kuchikoro huye zviri pasi pemakore gumi nemashanu ekuberekwa zvirimowo zvichikwikwidza nana mbuya dhori kutengesa. Varume vakwanda vanoratidza kuti vashandi yemuminda ye Nzimbe nekuda kwezvipfeko zvavo vakamomotera zvisikana izvi.
“Mhene dzedu dzapedzwa ne ma Grade 7,” akdaidzira umwe mukadzi wechikuru airatidza kushushikana nekutorerwa bizimusi rekutengesa bonde nevana vadiki.
Trish (Zita rebase) musikana anemakore Gumi nemshanu ekuberekwa akataura ne bepanhau re HealthTimes anoti iye haana vabereki huye anogara nambuya saka kutengesa bonde inzira yekutsvaga kurarama.
Chikoro ndakamira ndashairwa mari yechikoro, ndakatanga zvekurara nevarume ndine makore gumi. Kubva ipapo handina kuzombomira futi,” akadaro Trish.
Anoti iye akatombobatwa ne siki kana kuti Njovhera kaviri kose paanga asati akuziva zvekushandisa mabutiro kana kuti makondomu. Akati zvakare nguya ye lockdown yakambovashungurudza nekuti makondomu akamboshaikwa kwemavhiki mashoma.
“Ndakamborohwa ne siki, ndakamera mapundu kuzasi kwese uku zvekuti ndaimbofunga kuti ndaora. Ndakazoenda kuchipatara kunorapiwa ndikapora. Ikozvino ndava kushandisa makondomu. Nditori nemutmeo wekuti “No Kondomu, No Sex”. Mazuvano tava kuenda pamuzinda we Tsvonai Youth Centre kunotora makondomu nekurapwa siki pachena kana uchingewo waita munyama.
Panguva ino ye COVID-19, bonde harina kumbomira muno muChireedzi, ngoma yaitorohwa. Inga munongonzwa wani zvichinzi Nobody Can Stop Reggae, Bonde rairohwa mulockdown, hatina kumira isu.
“Dambudziko rakaitika nderekuti ma vhiki maviri ekutanga kwe Lockdwon, muzinda we Youth Centre wakambovharwa, takanetseka kuwana makondomu kasi basa harina kumbomira kunyange zvazvo mhene dzaiva shoma,”
Chiredzi inzvimbo ine mukurumbira we siki ne njovhera dzakasisiyana siyanana pamwe chete ne chirwere che HIV. Mumakore akambovharwa bhawa re Chigarapasi, vanamazvikokota vanoona nezve HIV ve National AIDS Council (NAC) vanoti ivo chirwere che HIV changa chaderera kasi pakangovhurwa bhawa iri patsva, vasikana nemadzimai anotengesa bonde vava kubva kune dzimwe nzvimbo kuzotengesera Muchiredzi zvinova izvo zvasimudza kupararira kwechirewre che HIV ne njovhera mu Chiredzi.
Vachitaura ne bepanhua rino, Councilor We Ward 3 yemu Chiredzi Town Council, Councilor Ropafadzo Magumire vakati ivo vasikana vadiki muchiredzi varikupinda mukutengesa bonde nekuti vanoona sekuti chinhu chakanaka kuita sezvo vasikana nemadzimai ati kurei vachimira pamigwagwa kuchiri kwakachena vachitengesa miviri.
“Nharaunda yedu ino iri exposed kuvanhu vatinoti ma commercial sex workers nekuti isu muno muward tisu varidzi vebhawa redu guru ruinozni Chigarapasi inova nzvimbo yekuti vasikana vedu vemunzvimbo inoyi vagara vari mubasa rekutengesa bonde kuti vawane raramo vanenge vakamira pamigwagwa. Dzimwe nguva vanokasika kumira zvekuma half five kuchangovira, saka izvozvo vana vanozviona vachienda kuzvitoro nekwakasiyansiya.
“Izvozvi zvinovaita kuti varambe varambe vachiona zviitiko zvakadero sake nekudaro, vana vanotsvaga kuti sei vana sisi vedu vachiita muraramiro wakadai? vozoona kuti vanonadro nekuti zvinovapa mari. Saka izvozvi nekuoma kwakaita hupenyu vabereki vavo dzimwe nguva havakwanisi kuti vava tengera malunch ekuenda nawo kuchikoro saka ivo vanenge vakuda kutsvaga mari,” vakadaro Councilor Magumire
Vakati zvakare mamiriro akaita nharaunda ye ward three ndeekuti yakawanda vechidiki saka mararamiro avo ndeekuti kana vasingaendi kuchikoro vanenge vakagara mudzimba dzavo. Vamwewo chikoro vakarega vanege vachingoita zvakasiyana siyana.
“Vazhinji vavo, kana vari vakomana, vazhinji vari kuita zvemadrugs. Vasikanawo nekuoma kwakaita hupenyu huye nekutsvaga kurarama nekuti mabasa hakuna huye takatarisa nekuti lockdown yakanga isingatenderi munhu kufamba, hupenyu hwavo hwakavhiringidzika saka dambudiko guru ratakaita nderekuti vazhinji vanga vakuita zve commercial sex work zvekuti vanenge vachitengsa miviri yavo vachiwana muripo.”
Vakati ivo lockdown yakavhara zvakawanda kunyanya mararimiro evanhu nenzira dzavo dzekutsvaga mari kasi chinhu chimwe chayakatadza kuvhara inyaya dzine chekuita nebonde sezvo vanhu vaitsvaga nzira dzekurarama nadzo.
“Vanhu vazhinji vaienda pa Chigarapasi apa kunotsvaga ma customer chero panguva ye lockdown. Sake nekuda kwaizvozvo, matambudziko mamwe aizomuka ndeekuiti vamwe vacho vaizonobatirana ne ma Sexually Transmitted Infections (STIs) zvirwere zvepbonde. Dambudziko raizouya nderekuti vachiwana mushonga kana kurapiwa kana vachinge vabata zvirwere izvi nekuti chipatra pakatanga lockdown vazhinji varwere vaidzoswa kumba.
“Tine rombo rakanaka muno mu ward medu nekuti tine youth centre yedu Inotungamirwa ne neve Zimbabwe National Family Planning Council (ZNFPC). Pakatanga lockdown, Youth Centre iyi yakamboti vharei kasi pakawanikwa zvekushandisa muzvipatara (Protective Personnel Equipment PPE) Havana kutora nhguva vakabva vavhura.”
Coucilor vakati ivo Tsovani Youth Centre yakabatsira vakawanda kuti vawarapiwe kunyanya panguva dzelockdown, yakabatsira kuti vawane makondomu kuti vadzivirirwe zvirwere zvepabonde.
Mukuru anoona nezve ve chidiki pa Tsovani Youth Centre huye ari we mushandi we ZNFPC mu Chiredzi Muzvare Lindiwe Ndoda vakati ivo vasikana vakawanda vechidiki vakabatwa ne siki kana kuti njovhera mu Chiredzi panguva ye lockdown zvichikonzerwa ne kusafambika kwaiitika nguva ye lockdown huye nekushaikwa kwakamboitwa makondomu nezvudziviriro.
“Palockdown, takarapa vana vatanhatu (6) vanga vane njovhera vazhinji ava vana vane makore makumi maviri. Vamwe taivarefeya kuchipatara kuti vanorapwa zvakare,” vakadaro Muzvare Ndoda.
#COVID19, BREAKING NEWS, Features, HIV/AIDSChigarapasi, Chiredzi, COVID-19, HIV, LINDIWE NDODA, NJOVHERA, Ropafadzo Magumire, STIs, TSOVANI YOUTH CENTRE, ZNFPC
US Government launches US$5 Mln Initiative To Expand Economic Opportunities For Zim Youth